MAXAA LOOLA JEEDAA LA DAGAALANKA ARGAGIXISADA.
Waxay dad badani is waydiinayaan talow maxuu Maraykan ka fa’iidayaa dagaaladan jiho walba u jeeda ee aan dhamaadka lahayn.
Hadaba inta aanan Su’aashaa ka jawaabin waxaynu dib u yara eegaynaa siyaasadaha Maraykanku uu la damacsanaa in mudo ahba Caalamka ka dib markii uu dhamaaday Dagaalkii qaboobaa (Cold War) midowgii Soofiyatkuna kala burburay, awoodii labaadna ee dheelitirka ahaydna meesha ay ka baxday, Maraykanna caalamkiina la kiliyoobay.
Laga soo bilaabo mudadaa waxuu Maraykanku raadinayay Cadaw Kale oo buuxiya meeshii Ruushku ka baxay waxaanu il gaara ku eegayay caalamka islaamka oy ku tilmaameen cadawgooda koobaad, lama hurtana tahay in laga hortago cadawgaa qarsoon ,taana waxaynu ka qaadanayanaa sida ay qoreen aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta maraykanku, tusaale ahaan Samuel Huntigton oo ah nin Maraykan ah laakiin asalkiisu yahay Yahuudi waxuu qoray Buug magaciisu ahaa(Clash of Civilization) dulucdiisa iyo ujeedadiisuna tahay in ay dhicidoonto hirdan dhex mara Xadaarada reer galbeedka iyo ta Muslimka, hirdankaa ama dagaalkaasoo noqondoona dhinaca Dhaqanka ama dhiinta, Samuel Huntigton waxuu ku baraarujiyay Dowlada Maraykanka inay u diyaar garowdo dagaalkaa. Waxa isna book fikirkaa mid la mida qoray Rechard Nicson oo ah madaxwaynihii hore ee Maraykanka boogaana waxuu u bixiyay (Sieze The Moment) oo ah "Fursada ka faa’iidaysta", waxaanu Nicson bookaa ku sheegay in cadawga koobaad ee Maraykanku yahay Islaamka,waxaanu ku booriyay inay ka fa’iidaystaan Fursadaha soo mara sidii muslimka loola dagaalami lahaa.
Beryahan dambena waxa dunida reer galbeedka ka soo shaac baxay kalmadaha ay ka midyihiin (Islamophobia) oo ah cabsi laga qabo Islamka .
Waxaana taa inoogu filan hadalkii kasoo yeedhay Gen. William G. Jerry Boykin oo ka mid ah Hoggaamiyayaasha Sare ee Ciidamada Mareeykanka isla markaana ah wadaad gacanyaraha u ah Wasiirka gaashaandhigga xagga nabadsugidda ,Generaalkaasi ,wuxuuna ku tilmaamay dagaalka argagaxisada lagula jiro mid u dhexeeya Qiyamka Krishtaanka iyo Yuhuudda iyo wax uu ku tilmaamay shaydaan", waxaanu cadeeyay colaada madaxda Maraykanku u qabaan Muslimiinta inay tahay mid diini ah oo ku tilmaamay inay yihiin Shaydaan.
Hadaba isagoo Maraykanku ka duulaaya afkaarahaa iyo talooyinkaa ay mufakiriintooda usoo jeediyeen ayuu intaaba ku dadalayay sidii ay uugu heli lahaayeen fursad lagula dagaalamo Muslimka,waxayna isku dayday dowlada Maraykanku inay nidaamyo cusub ku soo rogto aduunka kuwaasoo danaheeda siyaasadeed iyo dhaqaalaba u adeegaya, waxaana ka mid ahaa (New World Order) oo lagu dhawaaqay markii dagaalkii labaad ee Gacanku bilaamay,dagaalkaasoo Maraykanka waxyaaba badan u fududeeyay, nidaamkaa cusub oo nuxurkiisu ahaa sidii ay siyaasadaheedu u hirgeli lahaayeen, nidaamkaasii markii uu u hirgili waayay waxa kaloo jiray nidaam kaloo sanadadan dambe uu watay Maraykanku kaa soo ahaa waxa loogu yeedho (Globalization) oo ujeedadiisu tahay in wixii ay doonaan dunida ku sanduleeyaan haday noqoto mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid diineedba.
Nidaamyadaas kor ku xusan iyo kuwa la midka ahaaba waxay sheegayaan in siyaasadaha Maraykanka loo hogaansamo.Waxaana jiray shirar badan oo loo qabtay sidii loo hirgelin lahaa nidaamyadaas ama siyaasadahaas uu maraykanku damacsanaa.
Waxa ka mid ahaa shirarkaas:
1. Shirkii Deegaanka oo lagu qabtay Cairo dalka Masar.
2. Shirkii Haweenka oo lagu qabtay Beijing dalka China.
3. Shirkii u dambeeyay ee WTO oo laguna qabtay Doha dalka Qatar.
Iyo qaar badan oo ka dambeeyay shirarkaa kor ku xusan oo aduunka kale lagu kala qabtay.
Iskusoo wada duuboo shirarkaas oo dhami waxay u jeedadoodu ahayd sidii siyaasadaha maraykanka iyo sahyoonida dunida tamarta daran ama Muslim World-ka loogu fulin lahaa ama loogu sandullayn lahaa, waxaana u daliil ah meelaha lagu qabanayay shirarka oo loogu tala galay.
Hadaba si wuxuu doonaayo uugu hirgalaan ayaa intaaba Maraykan wuxuu ku dadaalayay inuu steratejiyado cusub ka samaysto meelo badan oo caalamka ka mida gaar ahaan dunida Muslimka sida Bariga dhexe ama Badda cas, Geeska Africa iyo Central Asia. Dagaalkii labaad ee gacankuna waxuu u fududeeyay maraykanka inuu saldhigyo badan ku yeesho wadamada gacanka carabta iyo qaar ka mida bariga dhexeba
Iyadoo hindisayaashaa Maraykanku ay socdaan ayaa waxa dhacay Qaraxyadii 11 Sep, si uu Fursadaa dahabiga ah uuga fa’iidaysto, siyaasadihiisii gar darrada ahaana u hirgeliyo ayaa Bush ku dhawaaqay ka dib Qaraxyadaas inuu qaadayo dagaalka uu ugu yeedhay(Crusade War) lagagana soo hor jeedo Argagixisada (Muslimiinta) Dagaalkaa oo ka hawl gelidoona 60 dal, meel uu ku dhamaanayo iyo goor uu dhamaanayana aan la saadaalin karin. Dagaalkaas Bush sheegayna waxa lagu bilaabay Afganistan oo Taliban ka talinaysay laguna eedeeyay inay hoy siiyeen ninkii lagu eedeeyay Qaraxyadaas 11 Sep dhacay, dagaalkii laga waday Afganistana waxuu ku dhamaaday in Taliban xukunkii laga qaado waxaana loona dhiibo dad uu Marayankanku wato oo danahooda u adeega iyadoo aan dadkii masaakiinta ahaa ee reer Afganistana wax loo qabtay ayan jirin.
Taasina waxay Maraykanka u suura gelisay inuu cagta dhigo Central Asia kuna yeesho saldhigyo uu ciduu doono kaga duuli karo markuu doono.
Bush markii dagaalkii Afganistan socday waxuu sheegay inaanu Afganistan ku eekaandoonin ee ay jiraan dalal badan oo iyagana talaabo taa Afganistan la mida laga qaadi doono. dalalkaa waxa ka mida Iraq , Somalia , Palestine iyo qaar kale.
Laakiin marar badan ayay sheegeen inay Suuriya iyo Iran ku jiraan dalalka maraykan u qorshaysan inuu taabo ka qaadidoono.
Dagaalkii gardarada ahaa ee Bush iyo Tony Blair ku qaadeen dalka Ciraaq waxuu soo shaac bixiyay ujeedooyinkii u qarsoonaa ee ahaa cadaawada diimeed ay u hayaan dadka muslimka ah.
Madax badan oo dunida Muslimka ka mida oo markii hore ku faraxsanaa in Sadaam Hussien iyo Talibanba xukunka laga qaado,ayaa imika garwaaqsaday ujeedooyinkii Bush ka lahaa ladagaalanka Argagaxisada,oo aan ahayn ujeedadiisu Sadaam iyo Talibaan in xukunka qaado ee ay ahayd cidhibtirka awoodaha iyo khayraadka dalalkaas.
Siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in Bush imika uu wado qorshe sidii uu dib xukunka uugu soo celin lahaa madaxdii Talibaan iyo xisbigii (Albacas) ee Ciraaq ka talinayayba, waayo awoodoodii ayuu burburiyay,ka dib markii uu faraha kaga gubtay dagaaladii uu ka waday Ciraaq iyo Afganistaan.
Waxaan filayaa imika in su’aashii ahayd maxuu Maraykan ka fa’iidayaa la dagaalanka argagaxisada inay inoo u cadaatay, taasoo ah in awood kastoo Yahuudu ka baqayso mid mid looga takhaluso uuguna horaysay Ciraaq, kuna xigidoonaan siduu Bushba sheegay Suuriya,Iran iyo dalal kaleba sida Sacuudiga.
Maanta dunida muslimka waxuu xaalkoodu marayaa sidii Nebigu(SCW) sheegay ee ahaa "daad xoor".
Waxaana in wax lagu qaato ah hadaladii Mahathir Maxamed uu u jeediyay madaxda Muslimiinta shirkoodii ka dhacay dalka Malaysia,si geesinimo lehna uugu booriyay madaxdii shirka joogtay in hordada laga kaco, hadalkaa Mahathirna waxuu kaga dhawaajiya dalal badan oo Yurub ah, oon ogolayn in cidi runta ka hadasho.
Gebagebadii su’aasha dad badani is waydiinayaan waxay tahay Maraykan maku guulaysandoonaa siyaasadaha xaq darrada ah ee uu wado mise waxuu mari halkii ay mareen quwadihii isaga ka horeeyay.
Waa su’aal jawaabteedu ay u cadaandoonto cidii ilaahay nafta u daayo.
Ilaahayna daalimka wuu u yara seeto dheereeyaa laakiin markuu qabto kama fakado.